Madaxweynaha Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya Oo Xidhxidhay Siyaasiyiin Mucaarad Ah – somalilandtoday.com
Madaxweynaha Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya Oo Xidhxidhay Siyaasiyiin Mucaarad Ah
(SLT-Jigjiga)-Maalintii afraad ayey ku xidhan yihiin xabsi ku yalla magaalada Jigjiga siyaasiyin ka dalbaday in madaxweynaha dowlad deegaanka Itoobiya Mustafe Cagjar uu xilka iska casilo waxayna sheegeen inay saluugsanyihin siyaasadda xukuumada ay ku maamuleyso deegaanka.
Saacado kadib wareysi uu maalintii axadda siiyay BBC-da ayaa waxaa xabsiga loo taxaabay Khadar Jigre Aadan oo ka mid ah ganacsatada degaanka kana mid ahaa dadkii ugu waaweynaa ee asaasay ururkii Dulmidiid. Wuxuuna sidoo kale ahaa wasiirkii madaxtooyada ee ugu horeeyay xukuumada madaxweyne Mustafe Cagjar ka hor intii aanan isku shaandheynta la samayn.
Waraysigan ayuu Khadar Jigre ku sheegay inuu deegaanka musuq baahsan ka jiro oo xitaa waxbo laga qabanin abaarta ka jirta deegaanka Libaan oo uu tusaale ahaan u soo qaatay wuxuuna sheegay in shan qof ay oon ugu dhinteen.
”Marka aad dadka wareeysato waxay kuu sheegayaan in xukumaddi Cabdi Maxamuud Cumar lix sano musuqi ay ku gartay ay xukumadda hadda jirto 6 bilood ku gaartay, abaar xun ayaa ka jirta deegaanka, markaan tusaale u soo qaato gobolka Libaan biyo la’an ayaa ka jirto magaalo madaxdiisa,” ayuu yiri Khadar Jigre oo BBC-da la hadlaayay.
Axmed Maxamed Saahin oo horay u ahaa xildhibaan kana mid ahaa dadkii ka dambeeyay kacdoonkii uu madaxweynihii hore xilka uga tagay ayaa markii shanaad isna la xiray.
Waxaa la sheegayaa in siyaasiyintan loo xiray in ay ka soo horjeesteen xukuumada deegaanka .
14 beri kadib ayaa la soo taagi doona maxkamada waxayna dowladdu sheegtay in raggan ay ku eedeysanyihin kacdoon shacab.
Arrintan ayaa ku soo aadeysa maalmo un kadib markii uu madaxweynaha deegaanka sheegay in ay dadka xor u yihiin inay si buuxda fikirkooda u dhiiban karaan.
Isku dayo ay BBC-da kula xiriirtay mas’uuliyiinta deegaanka ayaanan mirodhal noqonin, si ay oga warbixiyaan sababaha rasmiga ah ee dadkan loo xiray iyo haddii wax caddeyn ah lagu hayo.
Isbadallada taxanaha ah ee ka dhacaya Itoobiya ayaa saameyn ku yeeshay dowladda deegaanka Soomaalida kaasoo sababay in bishii August ee sannadkii tagay uu is casiyo madaxweynihii hore ee Cabdi Maxamuud Cumar.
Cabdi Maxamuud Cumar ayaa hadda xiran, maxkamadeyntiisana ay socotaa isaga oo ay ku weheliyaan masuuliyiin sarsare oo maamulkiisa ka mid ahaa. Dawladda iyo shacabka ayuuna ka codsaday in la cafiyo, inkastoo aan dhag jalaq loo siin.
Dad badan ayaa soo dhaweeyay isbadallada ka dhacay deegaanka waxayna sheegeen in xuriyadda hadalka uu ka jiro deegaanka, balse xiritaanka siyaasiyintan ayaa waxa ay keentay in dadka qaar ay su’al geliyaan in deegaanka uu runtii ka jiro xuriyadda hadalka.